आज पनि रावणको श व यस गुफामा, अन्तिम संस्कार किन गरिएन: थाहा पाउनुहोस् रहस्य ! – Jagaran Nepal
आज पनि रावणको श व यस गुफामा, अन्तिम संस्कार किन गरिएन: थाहा पाउनुहोस् रहस्य !
काठमाडौं । नेपालीहरुको महान पर्व वडादशैं शुरु भएसँगै सबैलाई रामायणसँग सम्बन्धित रहस्यको बारेमा जान्न मन लाग्छ । यो विश्वास गरिन्छ कि आज पनि धेरै संकेत र रामायण र भगवान रामसंग सम्बन्धित कुराहरु श्रीलंकामा छन्, जसको बारेमा सबै जान्न चाहन्छन् ।
उक्त ठाउँले भगवान श्री राम र रावणसंग सम्बन्धित धेरै सत्य बताउँछ । नवरात्रिको अन्त्यपछि, दशैं दशौंमा मनाईन्छ, जसलाई विजयादशमी भनिन्छ । भगवान रामले दशमीको दिन रावणको वध गरेको विश्वास गरिन्छ ।
एक अनुसन्धानले दाबी गरेको छ कि आजको दिनमा पनि रामायणसंग सम्बन्धित लगभग ५० स्थानहरु छन् । अनुसन्धान अनुसार आज पनि रावणको लाश श्रीलंकाको पहाडमा बनेको गुफामा सुरक्षित छ ।
यो गुफा श्रीलंकाको रागलाको घना जंगलमा स्थित छ । भगवान श्री रामको हातबाट रावणको ज्यान गएको १० हजार वर्ष नाघेको छ । तर १० हजार पुराना रहस्यहरु आजका दिनमा पनि देख्न सकिन्छ ।
रावणको लाश राखिएको गुफा रागलाको जंगलमा ८ हजार फिटको उचाईमा रहेको छ । त्यहाँ रावणको शरीरलाई ममी बनाएर एक ताबूतमा राखिएको छ । लाशमा विशेष प्रकारको लेप लगाइएको छ, जसकारण यो हजारौं बर्षदेखि उस्तै छ ।
यो अनुसन्धान श्रीलंका को अन्तर्राष्ट्रिय रामायण अनुसन्धान केन्द्रद्वारा गरिएको हो । अनुसन्धान अनुसार रावणको लाश १८ फिट लामो र ५ फिट चौडा एक कफिनमा राखिएको छ । जानकारहरु सो कफिन मुनि रावणको अमूल्य खजाना (सम्पति) भएको विश्वास गर्छन् ।
त्यो खजानाको सुरक्षा एक भयंकर नाग र अन्य धेरै डरलाग्दा जनावरहरुले गर्छन् । यो विश्वास गरिन्छ कि जब भगवान रामले रावणको वध गरे, उनले अन्तिम संस्कारको लागी आफ्नो शरीर विभीषण लाई दिए ।
तर विभीषण सिंहासन ग्रहण गर्न हतारमा भएका कारण रावणको अन्तिम संस्कार गरेनन् र शरीर यथावत छोडेर निस्केका थिए । त्यसपछि नागकुलका मानिसहरु रावणको लाशलाई साथमा लिएर गए, किनकि उनीहरुलाई विश्वास थियो कि रावणको मृत्यु क्षणिक थियो, उनी फेरि जीवित हुनेछन् । तर त्यो भएको छैन ।
त्यसपछि उनीहरुले रावणको मृत शरीरलाई ममी बनाए, ताकि धेरै बर्षहरुको लागी सुरक्षित रहन सकोस् ।
अनुसन्धानमा रावणको अशोक वाटिका कहाँ थियो र उनले पुष्पक विमान कहाँ अवतरण गर्थे भन्ने कुरा पनि अध्ययन गरिएको छ । त्यसबाहेक, अनुसन्धानकर्ताहरुले भगवान हनुमानको पाईला पनि खोजेको दावा गरेका छन् । तर यी सबै कुराहरुको प्रामाणिकता उनीहरुले अझै प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् ।
-janaboli बाट साभार
याे पनि गर्नुहाेस
सन्तानलाई होचो हुन नदिन बेलैमा गर्नुहोस् यी ६ काम, हर्लक्क बढ्नेछ उचाइ !
काठमाडौँ । पुड्कोपनको समस्या पछिल्लो समय अस्वस्थ खानपानका कारण बढिरहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। अधिकांश हामी कतै पाहुना जाँदा होस् वा पाहुनाको स्वागत गर्दा सजिलोका लागि भन्दै जङ्ग फुडको प्रयोग गर्दै आइरहेका छौ। यसरी कोसेलीका रूपमा लगिएको जङ्ग फुड खानका बानी लागेका बालबालिका दाल, भात, तरकारी, सागसब्जी, फलफूल जस्ता आवश्यक खानेकुरा खान मन गर्दैनन् ।
त्यसैले आजकाल धेरै बच्चाहरू बजारमा पाइने प्याकेटका तयारी जंकफुड खाने गर्दछन् । तर प्याकेटका खाद्य सामाग्रीमा पर्याप्त पोषण नहुने भएकाले बच्चाहरू पुड्कोपन हुन सक्छन् ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार औसत बच्चाहरू जन्मँदा ४५ देखि ५० सेन्टिमिटर सम्मको रहने गर्दछन् । एक वर्षभित्र बच्चाको उचाइ २५ सेन्टिमिटरसम्म बढ्नु पर्छ ।
२ वर्षमा १२ सेन्टिमिटर बढ्ने तथा त्यसपछिका ३ वर्ष हरेक वर्ष ७ देखि ९ सेन्टिमिटर उचाइ बढ्नुपर्छ । अन्यथा उमेर अनुसारको उचाइ नबढे पुड्कोपन हुनसक्छ ।
पुड्कोपन हुनुको प्रमुख कारण भनेको जङ्क फुड खानमा धेरै चासो दिनु हो । यस प्रकारको समस्याको समाधान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भनेको अभिभावकको हुन्छ ।
अभिभावक बाहेक विद्यालय पनि यसको जिम्मेवार हो । अझ कतिपय स्थानमा विपद्का बेला सहयोग भन्दै बाँडिने राहत सामाग्रीमा पनि जङ्क फुड बढी मात्रा हुने गरेको छ । पुड्कोपन कम गर्न जान्नुपर्ने उपाय
३.गर्भवती हुदाँ अन्य समय भन्दा बढि मात्रामा पौष्टिक आहार खाने । पहेँलो फलफूल, माछामासु, सागसब्जी दिन बिराएर सेवन गर्ने ।
४.गर्भवस्थामा आमालाई तनाव हुने कुनै काम नगर्ने ।
५.गर्भवती महिलासंग झगडा गर्ने, कुटपिट गर्ने वा रुवाउने काम गर्नुहुदैन ।
६.शिशु जन्मीएपछि लगाइने सबै खोपहरु खोप तालिका अनुसारको समयमा लगाउने ।
८.बच्चालाई खानामा कोदो, फापर, गहुँ वा चामलको प्रयोग गर्ने, झोल वा दाल अनिवार्य ख्वाउने, हरीयो सागसब्जी, पाकेका फलफुल तथा प्रसस्त पानी ख्वाउने ।
९.कम्तीमा साताको २ पटक दूधदहि, माछामासुको खाने । खाजामा मकै, भटमास, चना, चिउरा लगायतको सामाग्री खाने बानि बसाल्ने ।